Jọshụa 5 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
5 O wee ruo na ozugbo ndị eze Amọraịt+ niile, bụ́ ndị bi n’ofe Jọdan, n’ebe ọdịda anyanwụ, nakwa ndị eze Kenan niile,+ bụ́ ndị bi n’akụkụ oké osimiri, nụrụ na Jehova emewo ka mmiri Jọdan takọọ n’ihu ụmụ Izrel ruo mgbe ha gafesịrị, obi malitere ịlọ ha mmiri,+ ume afọdụkwaghị n’ime ha n’ihi ụmụ Izrel.+
2 N’oge ahụ Jehova gwara Jọshụa, sị: “Were nkume rụọ mma ma bie ụmụ Izrel úgwù ọzọ,+ nke ugboro abụọ.”
3 Jọshụa wee were nkume rụọ mma ma bie ụmụ Izrel úgwù na Gibiat-haaralọt.+
4 Nke a bụ ihe mere Jọshụa ji bie ha úgwù: ndị niile si n’Ijipt pụta, ndị nwoke, bụ́ ndị ikom niile na-aga agha, nwụrụ n’ụzọ,+ n’ala ịkpa, mgbe ha si n’Ijipt na-apụta.
5 N’ihi na e biri ndị niile pụtaranụ úgwù, ma e bighị ndị niile a mụrụ n’ụzọ úgwù, bụ́ ndị a mụrụ n’ala ịkpa mgbe ha si n’Ijipt na-apụta.
6 N’ihi na ụmụ Izrel jegharịrị n’ala ịkpa afọ iri anọ,+ ruo mgbe ndị ikom niile na-aga agha, ndị si n’Ijipt pụta bụ́ ndị na-egeghị ntị n’olu Jehova nwụchara, bụ́ ndị Jehova ṅụrụ iyi na ya agaghị ekwe ma ọlị ka ha hụ ala ahụ+ Jehova ṅụụrụ ndị nna nna ha iyi inye anyị,+ bụ́ ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya.+
7 O mekwara ka ụmụ ha nọchie ha.+ Ọ bụ ndị a ka Jọshụa biri úgwù, n’ihi na ha bụ ndị a na-ebighị úgwù, n’ihi na e bighị ha úgwù n’ụzọ.
8 O wee ruo na mgbe ha bichara mba ahụ dum úgwù, ha nọdụrụ n’ebe ha bi, n’ebe ha mara ụlọikwuu, ruo mgbe ọnyá ha lara.+
9 Jehova wee sị Jọshụa: “Taa, ewepụwo m nkọcha Ijipt n’ahụ́ unu.”+ E wee kpọọ aha ebe ahụ Gilgal+ ruo taa.
10 Ụmụ Izrel wee nọgide n’ebe ha mara ụlọikwuu na Gilgal, ha wee mee ememme ngabiga n’abalị iri na anọ n’ọnwa ahụ,+ n’anyasị, na mbara ọzara Jeriko.
11 N’ụbọchị na-eso ememme ngabiga ahụ, ha malitere iri ụfọdụ n’ime mkpụrụ nke ala ahụ, bụ́ achịcha na-ekoghị eko+ na ọka* a ṅara n’ọkụ, n’otu ụbọchị a.
12 Mana wee kwụsị ịda n’echi ya mgbe ha riworo ụfọdụ n’ime mkpụrụ nke ala ahụ, mana adaghịkwara ụmụ Izrel ọzọ,+ ha wee malite iri ụfọdụ n’ime mkpụrụ nke ala Kenan n’afọ ahụ.+
13 O wee ruo mgbe Jọshụa nọ Jeriko nso na o leliri anya hụ otu nwoke+ nke guzo n’ihu ya, jiri mma ọ mịpụtara amịpụta.+ Jọshụa wee gakwuru ya ma sị ya: “Ị̀ dịnyeere anyị ka ị dịnyeere ndị na-emegide anyị?”
14 O wee zaa, sị: “Ee e, kama mụ onwe m bịara ugbu a dị ka ọchịagha nke ụsụụ ndị agha Jehova.”+ Jọshụa wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala, kpọọ isiala+ wee sị ya: “Gịnị ka onyenwe m na-agwa ohu ya?”
15 Ọchịagha nke ụsụụ ndị agha Jehova wee sị Jọshụa: “Yipụ akpụkpọ ụkwụ gị, n’ihi na ebe i guzo dị nsọ.” Jọshụa wee mee otú ahụ ozugbo.+